1 USD သို့ NGN ᐈ ပွောငျး $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ
1 USD သို့ NGN
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ 🇳🇬 နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 USD သို့ NGN. ဘယ်လောက်လဲ $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ? — ₦410.659 NGN.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း NGN သို့ USD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် USD NGN သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် USD NGN သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
ပွောငျး 1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: ₦410.659 NGN (2.549)0.625%
ပြောင်းပြန်: $0.00244 USD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရန် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ ခဲ့: ₦386.417. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် တိုး 24.24 NGN (6.27%).
50 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ100 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ150 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ200 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ250 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ2000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ4000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ8000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ1000000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဗီယက်နမ် ဒေါင်6.15 အိုက်စလန် ခရိုဏာ သို့ ရုရှ ရူဘယ်10 တူရကီ လိုင်ရာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ38 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ သို့ အီရန်ရီအော်လ်100 ရုရှ ရူဘယ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်900 ယူရို သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ65 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1200 ယူရို သို့ အီရန်ရီအော်လ်3800 တူရကီ လိုင်ရာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ43.4 ကနေဒါ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.75 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ အီရန်ရီအော်လ်800 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ8 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ18500 အိန္ဒိယ ရူပီး သို့ ယူရို